Inona no vokatry ny marketing ara-tsosialy? | Martech Zone
Inona no atao hoe marketing media sosialy? Fantatro fa toy ny fanontaniana fanabeazana fototra izany, saingy tena mila adihevitra kely. Misy refy marobe amin'ny paikady marketing ara-tsosialy lehibe ary koa ny fifandraisana misy ifandraisany amin'ny paikadin'ny fantsona hafa toy ny atiny, karoka, mailaka ary finday.
Andao hiverina amin'ny famaritana ny marketing. Ny marketing dia ny hetsika na asa fikarohana, fandrindrana, fanatanterahana, fampiroboroboana ary fivarotana vokatra na serivisy. Media sosialy dia fampahalalam-baovao ahafahan'ny mpampiasa mamorona atiny, mizara atiny na mandray anjara amin'ny tambajotra sosialy. Ny haino aman-jery sosialy amin'ny maha-mpanelanelana azy dia tena tsy mitovy amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana noho ny antony roa. Voalohany, ampahibemaso ampahibemaso ny hetsika ary azon'ny mpivarotra anaovana fikarohana. Faharoa, mamela an-tserasera ny fifandraisana amin'ny lafiny roa - na mivantana na an-kolaka.
Misy 3.78 miliara mpampiasa media sosialy manerantany ary io isa io dia hitohy hitombo mandritra ny taona vitsivitsy. Raha ny fijoroany, dia mitovy amin'ny 48 isan-jaton'ny mponina manerantany ankehitriny.
Inona ny atao hoe Marketing Media Sosialy?
Ny paikady marketing ara-tsosialy matanjaka dia tsy maintsy mampiditra ny mampiavaka ny haino aman-jery sosialy ary koa manararaotra ny fomba ahafahana manara-maso sy mampiroborobo ny marika. Midika izany fa tsy fananana paikady media sosialy feno ny fananana paikady hanosehana bitsika 2 isan'andro. Ny paikady feno dia mampiditra fitaovana sy fomba fiasa amin'ny:
Market Research - Manangona fampahalalana mba hikarohana tsara kokoa sy hahatakatra ary hifandray amin'ny mpihaino anao.
Fihainoana ara-tsosialy - Fanaraha-maso sy fanehoan-kevitra amin'ny fangatahana mivantana avy amin'ny mpihaino anao, ao anatin'izany ny serivisy ho an'ny mpanjifa na ny varotra.
Reputation Management - Mitahiry sy manatsara ny lazanao manokana na marika, anisan'izany ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso, fanangonana ary famoahana.
Fanontana ara-tsosialy - ny fandrindrana, ny fandaharam-potoana ary ny famoahana atiny izay manome fahatsiarovan-tena sy lanja ho an'ny mpanjifanao mety ho tafiditra ao, anisan'izany ny fomba, fijoroana vavolombelona, ​​fitarihana eritreritra, famerenana vokatra, vaovao ary hatramin'ny fialamboly.
fifaneraserana - mandray anjara mavitrika amin'ny paikady izay mampitombo ny fahafahanao mahazo ny influencers, ny prospect, ny mpanjifa ary ny mpiasa.
Fampiroboroboana ara-tsosialy - Paikady fampiroboroboana izay mitondra ny valin'ny orinasa, ao anatin'izany ny dokam-barotra, ny tolotra ary ny fanentanana. Mety hitatra amin'ny fitadiavana sy fanakaramana ireo influencer hampivelatra ny fampiroboroboanao amin'ny tambajotran'izy ireo.
Ny valin'ny asa dia tsy voatery ho ny tena fividianana, fa mety hanangana fahatsiarovan-tena, fahatokisana ary fahefana. Raha ny marina, ny haino aman-jery sosialy indraindray dia tsy fitaovana fampandehanana tsara handroahana ny fividianana mivantana.
73% amin'ireo mpivarotra no mino fa ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny alàlan'ny varotra media sosialy dia nahomby na nahomby tokoa tamin'ny orinasany.
Ny haino aman-jery sosialy dia matetika ampiasaina hahitana amin'ny alàlan'ny vava, loharano fifanakalozan-kevitra ho an'ny fikarohana, ary loharanom-pifandraisana - amin'ny alàlan'ny olona - amin'ny orinasa iray. Satria misy lalana roa, tsy manam-paharoa amin'ny fantsom-barotra hafa.
Ny 71% amin'ireo mpanjifa izay efa nanana traikefa tsara tamin'ny marika amin'ny tambajotra sosialy dia mety hanolotra ny marika amin'ny namany sy ny fianakaviany.
Marketing amin'ny fiainana
View Martech ZoneInfografika momba ny antontan'isa momba ny haino aman-jery sosialy
Fampiasana media sy media ohatra ampiasaina
54% amin'ireo mpampiasa media sosialy no mampiasa media sosialy hikarohana vokatra.
Market Research - Miara-miasa amin'ny mpanamboatra akanjo aho izao izay mandefa ny marika mivantana amin'ny mpanjifa amin'ny Internet. Mampiasa fihainoana ara-tsosialy izahay hamantarana ireo teny lakile izay ampiasain'ny mpanjifa rehefa miresaka momba ireo mpifaninana ambony indrindra hahafahanay mampiditra an'io voambolana io amin'ny ezakay marika.
Fihainoana ara-tsosialy - Manana fanairana namboarina ho an'ny marika manokana sy ity tranokala ity aho mba hahitako ny voalaza ao amin'ny Internet ary afaka mamaly azy ireo mivantana. Tsy ny rehetra no manome marika marika amin'ny marika, ka ilaina ny mihaino.
Reputation Management - Manana marika roa eo an-toerana miara-miasa amiko aho fa nanangana fangatahana famerenana mandeha ho azy ho an'ny mpanjifany izahay. Ny fanamarihana rehetra dia angonina ary voavaly, ary ny mpanjifa faly dia voatosika hizara ny heviny amin'ny Internet. Izany dia nanjary nitombo ny fahitana tamin'ny valin'ny fikarohana teo an-toerana.
Fanontana ara-tsosialy - Miara-miasa amin'ireo orinasa maromaro mitantana kalandrie atiny aho ary mampifantoka ny ezaka amin'ny fandaharam-potoanany ao Agorapulse (Ambasadaoro aho). Mamonjy fotoana iray taonina ho azy ireo izany satria tsy mila mivoaka sy mitantana mivantana ny salantsalany rehetra. Mampiditra izahay fanentanana UTM mba hahafahantsika mahita ny fomba fitarihan'ny media sosialy ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po hiverina any amin'ny tranonkalany.
fifaneraserana - Mampiasa sehatra mavitrika iray aho izay manampy ahy hahafantatra sy hifandray amin'ireo influencers sy fikambanana mety manakarama ahy ao amin'ny LinkedIn. Nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fahafahako miteny ary nanampy ny orinasako hampitombo ny varony.
Fampiroboroboana ara-tsosialy - Betsaka amin'ireo mpanjifako no mampiditra doka amin'ny media sosialy rehefa mampiroborobo hetsika, webinar, na varotra. Tena mahasoa tokoa ny tanjona kendrena ataon'ireto sehatra dokambarotra ireto.
Tsapako fa afaka manangana fanentanana amin'ny haino aman-jery sosialy somary sarotra ianao izay mampiditra ny fampiasana sy ny mpanelanelana amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny safidiko etsy ambony. Mamoaka fampiasana ankapobeny ny tsirairay amin'ireo mpampita vaovao aho mba hanomezana hevi-baovao momba ny fomba hampiasan'izy ireo amin'ny fomba hafa.
Mpivarotra maro no mirona any amin'ny mpanelanelana mangatsiaka indrindra na amin'ilay ankafiziny indrindra. Ity dia lozam-pifamoivoizana miandry satria tsy manararaotra na manambatra ny mpanelanelana amin'ny fahaizany tanteraka izy ireo.
Ahoana ny fampiasan'ny orinasa ny media sosialy
Asehoy ny marikao - ny vavan'ny vava dia mandaitra tokoa satria misy ifandraisany tokoa. Ny olona amin'ny indostria manokana, ohatra, dia matetika mivory amin'ny fantsona sy vondrona media sosialy. Raha mizara ny marikao, ny vokatra na ny serivisinao ny olona iray, dia azo zahana sy zarain'ny mpihaino be zotom-po tokoa.
Mamolavola vondrom-piarahamonina tsy mivadika - raha manana tetikady ara-tsosialy mahomby amin'ny fanomezana lanja ny mpihaino anao ianao - na amin'ny alàlan'ny fanampiana mivantana, atiny voafantina, na vaovao hafa, torohevitra sy fika, dia hihalehibe ny vondrom-piarahamoninao hankasitraka sy hatoky anao. Ny fahatokisana sy ny fahefana dia singa lehibe amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fividianana.
Hatsarao ny serivisy ho an'ny mpanjifa - rehefa miantso vonjy aminao ny mpanjifanao dia resaka 1: 1 io. Fa rehefa manantona amin'ny media sosialy ny mpanjifa dia ho hitan'ny mpijery anao ny fomba fandraisanao azy sy hamaly ny filan'izy ireo. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa lehibe dia azo averina manerana ny vazan-tany… ary toy izany koa ny loza amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ampitomboy ny fampahafantarana nomerika - maninona ny atin'ny vokatra tsy misy tetikady hizarana sy hampiroboroboana azy? Tsy midika akory ny fampivelarana atiny raha manamboatra azy ianao dia ho avy izy ireo. Tsy hanao izany izy ireo. Ka ny fananganana tambajotra sosialy lehibe izay ahatonga ny fiarahamonina ho mpanohana ny marika dia mahery vaika tokoa.
Mampiroborobo ny fifamoivoizana sy ny SEO - Raha mbola manilika ny rohy, ny mpankafy sy ny mpanaraka ny motera fikarohana satria singa mivantana amin'ny laharan'ny motera fikarohana, tsy isalasalana fa matanjaka Ny paikadin'ny media sosialy dia hitarika valin'ny motera fikarohana lehibe.
Hanitatra ny varotra ary hahatratra mpihaino vaovao - voaporofo izany ny mpivarotra mampiditra stratejika media sosialy any ivelany ireo izay tsy manao. Ary koa, ny olona varotrao dia mahatakatra ny fomba hiatrehana ny hevitra ratsy amin'ny fizotry ny varotra satria miresaka amin'ny olona isan'andro izy ireo. Matetika ny departemantanao dia tsy. Ny fametrahana ny solontenan'ny mpivarotra eo amin'ny fiaraha-monina mba hananganana fanatrehana dia fomba iray lehibe hanitarana ny tratranao.
Tapaho ny vidin'ny marketing - na dia mitaky fahavitrihana aza izany, ny fitomboan'ny firoboroboan'ny media sosialy ho an'ny manaraka, fizarana ary tsindry dia hampihena ny vidiny amin'ny farany rehefa mitombo ny fangatahana. Misy tantara tsy mampino momba ireo orinasa niova ho amin'ny fanitarana taorian'ny fananganana fisian'ny media sosialy tokana. Izany dia mitaky paikady izay afaka mifanohitra amin'ny kolotsaina orinasa maro. Betsaka ihany koa ireo orinasa mahatsiravina amin'ny media sosialy ary mandany fotoana fotsiny.
49% amin'ireo mpanjifa no milaza fa miankina amin'ny tolo-kevitry ny influencer ao amin'ny media sosialy izy ireo hampahafantatra ny fanapaha-kevitr'izy ireo nividy.
Ao anatin'ny tsirairay amin'ireny dia misy ny fomba hampitomboana ny fahazoana sy ny fitazonana ny mpanjifanao ary koa ny hampiakarana azy ireo mandritra ny dian'ny mpanjifa.
Ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy
Na dia tsy manosika ny mpanjifako hampiasa vola tanteraka amin'ny fampiharana ara-tsosialy rehetra aza aho dia mahita fiverenana mitohy amin'ny fampiasam-bola rehefa mitantana ny lazany ny mpanjifako ary manangana lanja miaraka amin'ireo mpanaraka azy amin'ny Internet. Na ahoana na ahoana, ny fanaovana tsinontsinona ny herin'ny haino aman-jery sosialy dia mety hampidi-doza amin'ny marika iray raha toa ka diso fitantanana ny olana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy ireo. Manantena ny hahatongavanao sy hamaly ara-potoana amin'ny fotoana fohy amin'ireo mpanjifanao ireo mpanjifanao… ilaina ny fampidirana ireo fitaovana sy paikady hanaovana izany.
Tags: FacebookFacebook Marketingmarketing marketingtsena fikarohanalaza eo amin'ny InternetPinterestlazafitantanana lazahevitrafihainoana ara-tsosialyfampahalalam-baovao sosialyfikasana amin'ny media sosialySocial Media Marketingfampiroboroboana ny media sosialylazan'ny haino aman-jery sosialyfifaneraseranafampiroboroboana ara-tsosialyfamoahana sosialyTikTokyoutube marketing
Jan 6, 2009 ao amin'ny 7: 38 AM
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho, izaho no tao amin'ny fety iray manandrana mametraka ny sanganasa video ho an'ny mpitendry mozika! Ary na dia liana aza izy ireo, dia tsy tao anatin'ny toe-tsaina mety, tsy toy ny rehefa an-tserasera izy ireo ary mahita ny tranokalako ary avy eo mandany fotoana mijery ny asako, ankehitriny ny mpanjifa dia mifandray amiko.
Raha ny amin'ny fampiasana horonan-tsary hanamafisana ny tenanao manokana, tsara kokoa ve ny mifikitra fotsiny amin'ny fanoratana lahatsoratra ho an'ireo teny azo tondroina sa heverinao fa hevitra tsara ihany koa ny vlogging?
Jan 6, 2009 ao amin'ny 8: 09 AM
Misaotra! Ny tombony amin'ny fitorahana bilaogy miaraka amin'ny lahatsary mba hanomezana teny azo karohina dia mbola mpandresy ao amin'ny bokiko. Vitsy amin'ny olona no mampiasa fikarohana video - ary ao anatin'izany dia maro no tsy manam-potoana hamaritana tsara ny lahatsary.
Ny fampifangaroana azy roa dia mahery, saingy mitaky fotoana lava kokoa. Ny fahafahana mamoaka bilaogy Video (Podcastable), SY bilaogy momba ny horonan-tsary tsirairay dia tena hanatsara ny fahafahanao ho hita!
Jan 7, 2009 ao amin'ny 12: 29 AM
Lahatsoratra tsara Doug. Nahita tompona orinasa tsy miankina maro mampiasa ny tambajotra sosialy aho. Tsy hoe spam fotsiny izy io, fa maimbo spam mora. Ny fomba tsara kokoa dia ny maka fotoana hananganana votoaty an-tserasera (safidy tsara ny bilaogy), mamorona fahaiza-manao, mampiseho ny fahaiza-manaonao amin'ny asanao, ary mahazo valim-pikarohana.
Jan 7, 2009 ao amin'ny 7: 42 AM
Doug dia lahatsoratra mahafinaritra. Amin'ny maha-orinasa tranonkala tena isan-karazany, miezaka hatrany mitady fomba vaovao hampiasana ny media sosialy izahay mba hampitomboana ny varotra sy ny varotra. Heveriko fa nahavoa ireo hevi-dehibe matanjaka momba ny fampiasana tsy ara-dalàna ny media sosialy ianao, zavatra izay heveriko fa tokony hotadidin'ny manampahaizana manokana.